Cheap SBB Train Tickets Na njem ụzọ gasị Ahịa | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Cheap SBB Train Tickets Na njem ụzọ gasị Ahịa
Nke Switzerland Federal Railways, SBB, bụ ụlọ ọrụ ụgbọ oloko mba nke na-arụ ọrụ na Switzerland.
SBB ụgbọ oloko na-họọrọ na n'elu nke mba okporo ígwè usoro na Europe, na n’ime 2017 Ebu ụzọ nke mbụ maka ogo ọrụ ha, ogo nchekwa, na ndeksi arụmọrụ.
Ogologo ụgbọ oloko SBB kachasị ogologo, Ọwara Gotthard Base, na Switzerland Alps, nha 57.1 kilomita ma debe ndekọ ụwa.
Nọmba 1: Inweta gị SBB tiketi tupu dị ka ị nwere ike
Nọmba 2: Njem site na SBB n'oge oge kachasị elu
Nọmba 3: Nye tiketi gị maka SBB mgbe ị ji n'aka usoro njem gị
SBB ụgbọ oloko na-achọsi ike, na naanị 2 ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè ndị ọzọ dị ka asọmpi, ha ugbu a-anọgide n'elu oke maka ụgbọ oloko na Switzerland. Ha ga - enwe ike ịbanye ihe mgbochi ụgbọ oloko dịka nke ha nwere nke machibidoro ịgbanweta ma ọ bụ nkwụghachi tiketi ọ gwụla ma ọ bụ ụdị tiketi ọ bụla.. Ọ bụ ezie na a ka nwere ebe nrụọrụ weebụ ị nwere ike ire ndị mmadụ aka gị tiketi, SBB anaghị ekwe ka ere ahịa tiketi nke abụọ. Kedu otu esi enyere gị aka ịchekwa ego? Nye iwu tiketi gị naanị mgbe ị ji n'aka na usoro oge ị ga --echebe gị ịmebe otu tiketi ugboro abụọ n'ihi na ihe bịara na ịnweghị ike iji tiketi mbụ..
Nọmba 4: Zụta gị SBB tiketi na Save A Train
Tiketi SBB na-amalite site na € 12.50 ruo dị ka € 125 maka otu njem ụgbọ oloko. Nke ọnụahịa nke tiketi ụgbọ oloko SBB dabere na ụdị tiketi, ebe, na mgbe ịhọrọ njem:
Nke SBB Standard tiketi bụ kacha mgbanwe niile SBB tiketi. Nke a ụgbọ okporo ígwè tiketi bụ maka mgbe na-ebe 1 ụzọ ma ọ bụ gburugburu. Yabụ, na SBB ọkọlọtọ tiketi bụ kpochapụwo njem. Ọtụtụ ihe, nke a ụgbọ okporo ígwè tiketi dị irè maka ụbọchị dum ị họọrọ n'oge ịzụta, ruokwa mgbe 5 m bụ ụbọchị na-esote. Na mgbakwunye, can nwere ike ịzụta tiketi tiketi SBB maka klas nke 1 na nke 2. Nnukwu uru ọzọ nke tiketi ahụ na-atụ bụ na ụmụaka ruo mgbe ha ruru afọ 6 njem njem n'efu. Yabụ, ị nwere ike ịga njem ebe ọ bụla ịchọrọ ma na klaasị ọ bụla, na njem gị site A ruo B.
Kaadị njem asaa25
Inweta SBB gị ma dịrị n’oge n’oge, ụzọ ụgbọ oloko na-atụ aro ka ị rute opekata mpe 1 awa tupu ụgbọ oloko SBB gị apụ. Anyị na Save A Train ebe anyị gara ọtụtụ ụgbọ oloko SBB, kwadoro ịbịa ọbụna 30 Nkeji oge, ya mere na ọ dịghị mkpa ka i jiri ọsọ gbadaa nnukwu ọdụ ụgbọ okporo ígwè iji jide ụgbọ oloko ahụ. Na mgbakwunye, otu awa bụ oge zuru ezu iji nwee obi ụtọ na ụlọ ahịa na nri nri ma nweta ihe ndị ahụ ị chọrọ maka njem ụgbọ oloko ka ọ bụrụ nke ọma.
Ee. Can nwere ike ịnụ ụtọ N'efu Wi-Fi ọrụ na SBB ụgbọ oloko niile na njem niile na njem maka 60 nkeji.
Ọ bụrụ n’ị gụrụ ebe a, ị maara ihe niile ị chọrọ ịma banyere gị SBB ụgbọ oloko na-adị njikere ịzụta gị SBB ụgbọ okporo ígwè tiketi on Chekwa ụgbọ oloko.